बलिउडका तीन खानले नपाएको मौका पाए अक्षयले, ‘आखिर के हो त त्यो मौका’ ? « Light Nepal
बलिउडका तीन खानले नपाएको मौका पाए अक्षयले, ‘आखिर के हो त त्यो मौका’ ?
Published On : 14 September, 2018 5:54 pm
बलिउडमा एकछत्र राज गरेका सलमान, आमिर, शाहरुख हुन् । तर यि तीन खान भन्दा काम छैनन् अक्षय कुमार । उनी निकै फरक रहेका छन् । अक्षय बलिउडमा अन्य स्टारले भन्दा बढी कर तिर्ने अभिनेताको रुपमा पनि पर्ने गर्छन् ।
बलिउडका सदाबहार अभिनेता अमिताभ बच्चनसँग नाम जाडिएर चर्चामा आएकी अभिनेत्री रेखालाई बलिउडमा निकै सम्मानको साथ हेर्ने गरिन्छ । उनी सर्वाधिक चचाएमा आएकी अभिनेत्री हुन् । उनीसँग फिल्ममा खेल्ने अवसर प्राय कमैले पाउने गर्छन् ।
तर अक्षय कुमारले भने अभिनेत्री रेखासँग आज भन्दा २२ वर्ष अगाडी नै ‘खिलाडीयो का खिलाडी’ मा रोमान्स गरिसकेका छन् । उक्त फिल्ममा रेखासँग लभ अफयरमा रोमान्स गरेका अक्षय कुमारको जस्तो मौका बलिउडका तीन खानले अझै सम्म पाएका छैनन् ।